Hadda qof kastaa wuu ku soo dejisan karaa fiidiyowyada Instagram aan xadidnayn ee app-kan | Androidsis
Emilio Garcia | | Codsiyada Android, Sawir
Ka warran haddaan sidaas kuu sheego waxaad ka soo dejisan kartaa fiidiyow kasta Instagram-ka aaladdaada Android iyo sidoo kale bilaash? Waqti ka hor, waxaan rabay inaan ka soo dejiyo dhowr fiidiyow oo Instagram ah, si sax ah, waxaan la kulmay Snaptube. Waxaan ka helay app-ka inuu faa'iido badan leeyahay maadaama aan awooday inaan isticmaalo si aan u eego oo aan u soo dejiyo fiidiyowyo aan xadidnayn oo boqolaal ilo ah. Sidaa darteed, waxaan u maleeyay inaan horumarin doono casharro degdeg ah si aan ugu isticmaalo Snaptube kala soo bax boggaga Instagram halkan kaliya.
1 Maxaa Snaptube ka dhigaya Soodejiyaha ugu Fiican ee Instagram?
2 Sidee ugu soo dejisan kartaa fiidiyow kasta oo Instagram ah oo bilaash ah Snaptube?
2.1 Hel barnaamijka soo dejiyaha fiidiyowga ee Instagram (Snaptube)
2.2 Ka guuri URL fiidiyowyada / sawirka qaar ka mid ah Instagram
2.3 Soo rar fiidyaha Instagram si aad u soo dejiso Snaptube
2.4 Ka soo deji fiidiyowga (ama sawirka) Instagram-ka taleefankaaga
Maxaa Snaptube ka dhigaya Soodejiyaha ugu Fiican ee Instagram?
Snaptube waxaa horay u isticmaalay malaayiin isticmaaleyaal ah waana mid ka mid ah xalalka ugu kalsoon ee lagu soo dejin karo waxyaabaha ku jira Instagram iyo aaladaha kale ee bulshada. Waa kuwan qaar ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee aan faa'iido u helay Snaptube.
fududahay in la isticmaalo: Snaptube waxay leedahay interface nadiif ah oo fudud kaas oo noo ogolaanaya inaan soo dejino qoraal kasta oo Instagram ah anagoo gelaya URL-keeda.
Bilaash: Waxaad kala soo bixi kartaa inta fiidiyow ama sawiro intaad rabto Instagram (iyo boqolaal goobood oo kale) bilaasha Snaptube.
Kala duwan: Marka fiidiyoow la soo geliyo Snaptube, waxay kuu oggolaanaysaa inaad u kaydiso sidii faylka MP4 ama MP3 ee taleefankaaga. Waxa kale oo jira xulashooyin lagu badbaadinayo xallinta fiidiyowyada badan sida 720p, 1080p, 2K, iyo in ka badan.
In ka badan 50 goobood ayaa taageeray: Instagram ka sokow, waxaad sidoo kale kala soo bixi kartaa fiidiyowyada goobo badan sida Dailymotion, Twitter, Facebook, iwm, si fudud adoo galaya URL-keeda.
Ammaan ah: Si ka duwan soo-dejiyayaasha kale, Snaptube 100% waa badbaado. Uma baahnid helitaan xidid oo xitaa waa lagu kalsoon yahay wakaaladaha sida CM Security, Lookout Security, iyo McAfee.
Sidee ugu soo dejisan kartaa fiidiyow kasta oo Instagram ah oo bilaash ah Snaptube?
Sida aan kor ku soo sheegay, isticmaalka Snaptube aad bay u fududahay, waadna awoodaa kala soo bax sawirrada Instagram (iyo muuqaal) isla markiiba isaga la. Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso waa ku rakib Snaptube qalabkaaga oo geli URL barta Instagram-ka ee aad rabto inaad soo dejiso.
Hel barnaamijka soo dejiyaha fiidiyowga ee Instagram (Snaptube)
Waxaad ku bilaabi kartaa adigoo booqanaya website-ka rasmiga ah ee Snaptube taleefankaaga Android oo aad garaacdo badhanka "Download". Marka APK-ga la soo dejiyo, waxaad riixi kartaa oo u ogolow browserkaagu inuu dhammaystiro rakibaadda.
Ka guuri URL fiidiyowyada / sawirka qaar ka mid ah Instagram
Hadda, si fudud u fur Instagram oo baadh app-ka si aad u hesho muuqaal ama sawir aad rabto inaad soo dejiso. Ka dib markaad furto, waxaad riixi kartaa sumadda hamburgerka (astaanta saddexda dhibcood) ee xagga sare oo koobi kara xiriirkeeda.
Soo rar fiidyaha Instagram si aad u soo dejiso Snaptube
Si aad u wanaagsan! Hadda, kaliya ka fur Snaptube taleefankaaga, dhagsii barta raadinta si aad ugu dhejiso URL barta Instagram-ka. Riix Geli oo soo rar fiidyaha/sawirka Instagram-ka is-dhexgalka hooyo ee Snaptube.
Ka soo deji fiidiyowga (ama sawirka) Instagram-ka taleefankaaga
Marka barta Instagram-ka lagu soo geliyo taleefankaaga, badhanka "soo dejiso" ayaa laga hawlgelin doonaa qaybta hoose. Kaliya dhagsii oo dooro qaab / xallinta aad rabto inaad ku kaydiso faylka multimedia ee kaydinta qalabkaaga.
Markaad raacdo tillaabooyinkan aasaasiga ah, qof kastaa wuu qaadan karaa kaalmada Snaptube soo deji fiidyowyo Instagram aan xadidnayn oo bilaash ah. Marka fiidiyowga la soo dejiyo, waxaad ka geli kartaa barnaamij kasta oo Video ah (sida Gallery) taleefankaaga ama, sidoo kale, waxaad booqan kartaa maktabadaada Snaptube si aad ugu ciyaarto khadka tooska ah. Dareen xor inaad isticmaasho Snaptube oo la wadaag app-kan asxaabtaada si aad uga caawiso inay sidoo kale soo dejiyaan fiidiyow kasta Instagram.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Hadda qof kastaa wuu ku soo dejisan karaa fiidiyowyada Instagram aan xadidnayn ee barnaamijkan
Dhammaan koodhadhka League Rocket waa la cusboonaysiiyay ilaa 2021
Khiyaamada Clash ee ugu fiican